Manoro hevitra ny Semalt ny fomba fanombatombana ny fahombiazanao amin'ny seo ao amin'ny Google Search Console
Miezaka manakatra ny TOP ianao, fa tsy afaka? Tsy hitan'ny mpanjifa ny tranokalanao? Diniho, hamakafaka ary zahao ny valiny amin'ny alàlan'ny fitaovana momba ny analystika maoderina maimaimpoana an'ny Semalt . Ny fitaovan'ny kitapom-panamarinantsika ny teny fanalahidy dia manolotra laharana ny tranonkala eo amin'ny pejy valin'ny fikarohana ao amin'ny Google ary manome soso-kevitra momba ny fampiroboroboana fampiroboroboana.
Fantaro izay tadiavin'ny olona ary ambarao izay zavatra ilainy. Zahao ny laharan'ny mpifaninana aminao, apetraho ny tsiambaratelon'ny fahombiazany ary ampiasao ity fahalalana vaovao ity ho fampiroboroboana ny Internet. Miteraha tatitra an-tsipiriany momba ireo lesoka fanitsiana sy filaharana fanatsarana ho an'ny famakafakana raha mila izany. Aoka ho lasa web guru ianao ary handoa vola amin'ny tranokalanao.
Ampiasao ny fitaovana Semalt handinihana ny toeran'ny teny fanalahidy sy ny Web Analyzer hanaraka ny fironana:
Avereno ny fahitana azy ao amin'ny Internet
Hikaroka ny habaka mpifaninana
Ampahafantaro ny hadisoana optimization isaky ny pejy
Raiso ny tatitra momba ny toerana momba ny tranonkala
Ny tranokalanay tranonkala dia fitaovana famakafakana matihanina ho an'ireo webmaster manokatra ny varavarana amin'ny fotoana vaovao hanaraha-maso ny tsena, ny toerana misy anao ary ireo mpifaninana aminao ary koa ireo mpikaroka momba ny fandraharahana azo.
Nahoana ianao no mila izany?
Fifehezana ny toeran'ny tranokalanao
Ny fahazoana toerana tsara ao amin'ny Google dia nanjary kianjan'ny fivarotana an-tserasera. Ity no tokony ampahan'ny ampahany amin'ny paikady an-tserasera. Tena ilaina tokoa ny fanaraha-maso ny fivoaranao na ny tsy fahombiazanao.
Io dia ahafahanao mahazo sary feno momba ny toerana misy ny orinasanao eo amin'ny tsena. Ity angona an-tsoratra ity dia manampy anao hanasongadinana ireo hevi-dehibe amin'ny asanao amin'ny ho avy: fenoy ny tranokalanao amin'ny votoatiny mifototra amin'ny tenifototra mety, mividianana / fifanakalozana fifanakalozana araka ireo teny ifanarahana mifandraika amin'izany, sns.
Mifehy ny toeran'ireo mpifaninana aminao
Ny fanadihadiana lalina sy ny famakafakana ireo mpifaninana aminao no singa manan-danja indrindra amin'ny famakafakana tsena feno. Ny famakafakana fifaninanana dia ahafahanao manombatombana ny tanjaka sy ny fahalemen'ny mpifaninana aminao amin'ny tsenanao ary ny fametrahana paikady mahomby hanatsarana ny tombotsoanao fifaninanana.
I Semalt no hitari-dàlana anao amin'ny dingana famakafakana dingana mifanampy, hanampy anao hahafantatra ireo mpifaninana aminao, hamantatra sy handanjalanja ny toetrany, hanombana ny tanjany sy ny fahalemeny, ary hahitana ny tanjon'izy ireo sy ny paikadiny ao amin'ny faritra misy ny tsenanao.
Semalt Analytics dia hampahafantatra ny antsipiriany rehetra momba ny toerana misy ny mpifaninana aminao eo an-tsena. Ny fampiasana izany fampahalalana izany dia ahafahanao misandratra amin'ny fanatsaràna ny milina fikarohana, fampiroboroboana ary fampielezana doka.
Fahitana ireo tsena vaovao
Ny fananana paikady fividianana mpanjifa matanjaka sy ny fahitana ireo tsena vaovao dia singa manan-danja amin'ny orinasa rehetra. Raha tsy misy izany dia ho sahirana amin'ny fampivelarana ny orinasanao ianao amin'ny fomba misy dikany. Izany dia nilaza fa ny ampahany iray amin'ireo fanamby tena mahomby amin'ny lozisialy amin'ny fandraharahana orinasa dia mamaritra ny fantsona maharitra maharitra amin'ny fisarihana tsena vaovao.
Ny fampahalalana azo avy amin'ny famakafakana ny orinasanao dia manome fotoana vaovao amin'ny fizarana entana sy serivisy ary ho an'ny fampandrosoana ny marika any amin'ireo firenena voatondro, ka mahatonga ny orinasanao handinika ireo lafin-javatra mifandraika amin'ny faritra, sns.
Famadihana ny angon-drakitra amin'ny PDF sy ny Excel
Ny maha-zava-dehibe an'io asa io dia tsy azo atao ambanin-javatra ny fanolorana ireo mpanjifa sy ny fitantanana. Manana tombontsoa tokana ianao amin'ny famoronana tatitra misy marika fotsy ary manolotra azy ireo amin'ireo antoko fahatelo eo ambanin'ny marika.
Ahitana ny analytics Semalt
Teny fanalahidy natolotra
Manampy anao izahay hisafidy teny manan-danja ara-barotra mety.
Tsy mila kojakoja fitadiavana teny iray intsony. Raiso ny teny fanalahidin'ny mpifaninana aminao, fampahalalana lalina momba ny PPC sy SEO, angon-drakitra Google ary ny teknolojian'ny fikarohana ataontsika manokana. Ny sisa ataonao dia ny mamela ny fitantanana amin'ireo manampahaizana Semalt.
Alao sary an-tsaina sy hamakafaka ny toeran'ny teny fanalahidy araka ny fotoana. Ny famakafakana ny toeran'ny teny dia fomba fikarohana sy famakafakana ireo tena teny fikarohana izay ampidiran'ny mpampiasa Internet amin'ny milina fikarohana.
Ny fampahalalana azonao azonao momba ireo tena karoka farany ireo dia afaka manampy amin'ny fampahafantarana ny paikadinao, ary koa ny paikadin'ny varotra malalaka kokoa.
Nahoana no zava-dehibe ny fikarohana amin'ny teny fototra?
Mihamaro hatrany isika no mandre fa nivoatra ny SEO nandritra ny 10 taona lasa, ary ny fomba nanaovana ny tenin'ny tenantsika manokana dia mahavita miorina tsara amin'ny fikarohana ataon'ny olona isan'andro.
Ny fanaraha-maso isan'andro ny toerana misy ny tranonkalanao ao amin'ny rafitra fikarohana.
Fikarohana ny fifaninanana
Ny fikarohana sy ny famakafakana ny toerana misy ny mpikaroka ao anaty fikarohana.
Fanaraha-maso ny marinao
Ny sarin'ny marika no lehibe indrindra, satria ny 77% ho an'ny vinavina dia mitady anao irery.
Teny mampatahotra ho an'ny hevitra tsotra io. Ny marika anao dia ny tarehin'ny kompania. Milalao miaraka aminy, ary mety hanana olana ny hahafantatra anao. Ataovy tsy tapaka izany ary tsy ho ela ianao dia hanorina laza tsara.
Ary tsy mifehy ho an'ny mpanjifanao fotsiny ny fifehezana ny mombamomba ny orinasa. Vita tsara, ny fifehezana marika dia afaka mamonjy anao be dia be, fa tsy resaka adin-tsaina akory.
Ity fampahalalana an-tsoratra ity dia mampiseho ny taham-pahavitanao, ahafahanao mamolavola politika fiaraha-miasa mahay.
Fandinihana feno ny faneken'ny tranokala amin'ny fivoaran'ny tranonkala sy ny takian'ny indostrian'ny SEO.
Fanaraha-maso SEO SEO | Famakafakana SEO
Ny milina fikarohana dia mampiasa lafin-javatra maromaro mba hananganana tranonkala iray. Ny Website Analyzer dia fitaovana amin'ny fanadinana SEO izay mandinika ireo antony ireo sy ny maro hafa. Manampy anao hahita olana izay mety hanelingelina ny laharan'ny tranokalanao. Amin'ny alàlan'ny fanaovana fanadinam-baovao SEO an-tsipiriany, ny fitaovana ataontsika dia manome anao fomba fijery feno momba ny data SEO an'ny tranonkalanao, toy ny takelaka Meta, famintinana Google SERP, sitemaps, Robots.txt ary antontan'isa manan-danja maro hafa.
Fanadihadian'ny fifamoivoizana tranokala | Checker trafika tranonkala
Ao amin'ity fizarana fitaovan'ny tranokala ity dia afaka manatanteraka fanadihadiana feno momba ny fifamoivoizana amin'ny tranokala ianao ary hahitanao ny fitehirizam-bolan'ny tranokalanao. Izany rehetra izany miaraka amin'ny fepetra ilaina toy ny fisondrotry ny biraon'ny tranonkalanao. Azonao atao ny mampiasa ireto metika data ireto handrafetana ny paikadin'ny tranonkalanao bebe kokoa.
Taorian'ny fisoratana anarana amin'ny tranokalanay dia manomboka ny fizotry ny fanangonam-baovao data ary mahazo tatitra amin'ny antsipiriany momba ny toeran'ny tranonkalanao sy ireo mpifaninana aminao, ary koa ny fankatoavan'ny tranokalanao ny fananganana tranokala ary ny fenitry ny indostrian'ny SEO. Raha efa manana kaonty ianao dia afaka manampy tetikasa vaovao (tranonkala) foana ao amin'ny habakao manokana ary hojerena koa ny rafitra.
Mandritra ny famakafakana ny tranokalanao dia manolotra teny fanalahidy izay mamokatra varotra sy fitsidihana mifototra amin'ny atiny sy ny mombamomba ny anarana = '' tenimiafina '' azo avy amin'ny famakafakana ny tranokalanao. Azonao atao ny manampy ny teninao manokana na manaisotra ireo teny fanalahidy misy amin'ny fotoana rehetra.
Ny faritra tsirairay nasionaly mamela ny fikarohana an-tserasera amin'ny fiteny izay nofidinao dia ny herin'ny fikarohana Google 338. Ireo motera rehetra ireo dia mamaritra ny laharan'ny tranokalanao ao amin'ny Semalt.
Izany no mahatonga an'i Semalt manome torohevitra amin'ny fampiasana milina fikarohana marobe momba ny famakafakana ny tranokalanao. Afaka misafidy mpikaroka marobe ho an'ny famakafakana tranokala arak'izay tianao ianao.
Isan'andro dia manadihady ny toeran'ny tranokala izahay ary manaraka ny fivoaran'izy ireo. Ankoatr'izay, manangona fampahalalana momba ny mpifaninana aminao izahay (raha manapa-kevitra ny hanara-maso ny tranokalany).
Tsy toy ny tranokala hafa, havaozinay matetika ny toerana misy anao, izay manome anao tombontsoa tokana hanarahana ny toeran'ny tranokalanao amin'ny fotoana rehetra sy hahita ny fiovana farany.
Mahafao sivana maro ianao izay hahamora ny asanao amin'ny angon-drakitra ary manampy anao handray fanapahan-kevitra amin'ny fahombiazan'ny tetik'asa.
Azonao atao ny manangona ny teny fanalahidy hanaraha-maso ny fizarana manokana ny orinasanao sy handray an-tsoratra mahasoa izay haseho ao amin'ny fitaovana infographic ary hifandray amin'ny daty manokana.
Azonao atao ihany koa ny mampiasa rafitra API. Misy fomba maromaro maromaro ao amin'ny famindrana vaovao. Ny maoderina momba ny loharanom-baovaon'ny antoko fahatelo no tsara indrindra amin'izy ireo. Ity farany dia tena mora satria ny angon-drakitra natokana ho azy avy eo, dia ahafahan'ny mpampiasa hijery ny vaovao farany. Tsy misy ezaka takiana aminao. Azonao atao ny mijery matetika ny angona an-tsary amin'ny loharano voafantina.
Ireo famakafakana rehetra dia atolotra anao amin'ny tatitra an-tsipiriany an-tsoratra izay niova ho endrika PDF na CSV (White Label & Semalt Label) izay azonao alaina amin'ny tranokalanay.
Ireo tatitra ihany koa dia azo alefa any amin'ny adiresy imailaka voamarina, arakaraka ny haavon'ny voafidy. Izany dia mety hiova fo kokoa amin'ny fomba fijerinao manokana ary koa ny fanolorana ny mari-pandrosoana ny fandrosoanao ho amin'ny antoko fahatelo.
Ny tompon'andraikitra manokana anao dia tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny fivoaranao ary azo atao amin'ny consultation na fanontaniana amin'ny fotoana rehetra. Azonao atao ny mifandray aminay amin'ny ekipanao.
NB: Raha ajanonao ny fampiroboroboana ny SEO, hanaisotra ireo backlink rehetra, ary hampiala azy ireo amin'ny Google ao anatin'ny rakitra ny Google. Na na dia nihena tsikelikely aza ireo laharana tratrarinao nandritra ny fampielezan-kevitra SEO dia mbola avo kokoa noho ny teo aloha.
Raha manana tranokala ianao na efa niasa tranokala iray, dia tokony ho fantatrao tsara ilay teny hoe Search Engine Optimization (SEO) ary efa naheno / nampiasa iray amin'ireo fitaovana SEO koa ianao. SEO dia mampiditra ireo Google robots izay tonga amin'ny tranokalanao ary manitsaka azy io ho an'ny fanondroana. Ary mifototra amin'ny alàlan'ny algorithm, raha hitan'ny Google fa marina sy tsara ny datao, dia ho ambony kokoa amin'ny Google ny tranokalanao. Ity misy fomba fiasan'ny Google analytics.
Ny mpitsikilo dia mandinika ny votoatin'ny tranonkalanao ary mirakitra ny angon-drakitra ao amin'ny tranokalan'izy ireo ary manisa ny tranokalanao rehefa avy manadihady izany.
Mampiasa SEO izy ireo hamaritana ny fivezivezena amin'ny tranokala ho azonao sy ny haben'ny tranokala na ny pejy. Izany no antony tena ilaina ny manara-maso ny SEO anao. Ary ity no fitaovana fanadihadian'ny tranokala manampy anao.